Last nohavaozina: ranomasina. 17 2019 | 2 min namaky
Nahoana no tokony hisy anankiray ho revo amin'ny an alalan'ny fiarahana fady? Matetika ireo fady ny olona tsy ho avy intsony manerana ny olona tsara amin'ny fotoana mety; nitombo toy izany tahan'ny fisaraham-panambadiana raraka dehibe sy ny, fotsiny izany unpardonable. Izany, ny zavatra voalohany tokony hatao alohan'ny hivoaka amin'ny daty dia nandika ireo fady. Ireto misy fiarahana fady tokony manala ny.
1 Oh! Fa ny olona mijery tsara, fa hoe fohifohy kokoa noho ny ahy.
Inona ny haavony? Ahoana no ahafahan'ny fifandraisana mandeha diso satria ny olona dia fohy noho ny vehivavy? Raha tokony nanamarina amin'ny olona ny haavon'ny, tokony mandoa vola bebe kokoa ny fahasalamany, olona, fanabeazana sy ny hampanompo. Mazava ho azy fa afaka mandeha kokoa toetra toy ny endrika ivelany fotsiny tarehiny sy ny heriny tsara (eny ho an'ireo maditra fotoana), fa manapa-kevitra mifototra amin'ny olona ambony dia tsy mendrika izany.
2 Tokony ho ny iray na oviana na oviana ny dingana voalohany.
Izany no mampiaraka fady iray izay manakantsakana na dia ny sasany tamin'ny smartest sy coolest vehivavy. Io raha ny marina fady paharoa avy amin'ny angano izay manoro hevitra ny vehivavy miaraka matoky kokoa, lehilahy mahery izay Mandehana-getters sy ny lehilahy dia voasarika mora foana ny vehivavy izay manao azy ireo hahatsapa mafy, matoky ka mandehana-hahazo. Izany no fako fotsiny.
Tsy tena mety ny mihevitra fa ny olona rehetra dia mitovy. Betsaka ireo, ary eny olona maro noho ny tahotra ny fandavana mafy tsy mangataka ny vehivavy avy; foana ny vehivavy dia mila mandray andraikitra voalohany dia aoka hisy manontany azy na ny firaisana ara-nofo. Izany, na izany aza, Tsy izany mihitsy mametraka ny hoe toy izany ny olona tsy afaka ny ho mpiara-miasa, na ny fiainana be (raha tsy mijery lavitra) mampiaraka vadiny.
3 Izy no nangataka ahy mba namaky ny volavolan-dalàna; tsy maintsy manana ny hajan'ny vehivavy tena.
Tsy voatery ho; tsy hita afa-tsy ny fahafahana fisehosehoana ny fiahiana tena, amin'ny alalan'ny te nampitresaka ny volavolan-dalàna ny olona mifarana ny maneho ny anaty stinginess. Alaviro ny olona toy izany.
4 Izany fotsiny daty voalohany; ahoana no ahafahako manao firaisana?
Vehivavy nanelingelina mahatsiravina ity mampiaraka fady ny olona mihevitra fa tsy afaka manaja ny vehivavy izay hahazo akaiky ny alina voalohany, ka tsy raiki-pitia aminy.
Ireo vehivavy dia tsy maintsy mahatsiaro fa ny fifandraisana lehibe matetika ny indray mipi-maso kilalaon'afo na simia. Satria ianao nanao firaisana amin'ny daty voalohany, ka tsy ho tonga mora. Amin'ny firaisana ara-nofo voalohany mety daty iray amantarana ny ny hoe ianao sy ny vadinao mampiaraka vaovao no tena tsara gelling miara-.
5 Fa lehilahy tsara tarehy toa marina, fa ny mpiara-miasa ny.
Ny fady fa ny fifandraisana eo amin'ny mpiara-miasa aminy pitiavana matetika no naharitra ela noho ny anton-javatra toy ny fahasaro-piaro, fieritreretana zavatra hafa, tavan'olona sy ny fifosana. Maro ihany koa ny nisalasala fifandraisana toy izany rehefa matahotra fa ny fisarahana dia mety hahatonga ny fiainana ao amin'ny toeram-piasana tena fadiranovana ho azy ireo.
Ario fady izany haingana araka izay azo atao araka ny mety hahita fiainana tonga lafatra mpiara-miombon'antoka eo amin'ny mpiara-miasa taminy. Ny zavatra tsara indrindra momba ny fifandraisana toy izany dia ny aminareo roa dia hahazo ny handany fotoana be dia be amin'izy samy izy; dia afaka miara-mandeha sy amin'ny asa, dia afaka manana ny sakafo antoandro miara-, handray anjara amin'ny birao hahazoam-Niara sy ny sisa. No ataovy azo antoka fa ny fahasamihafana manokana (raha misy na inona na inona) tsy hisy fiantraikany ny asa.
Tsy avela hilalao fady ireo anjara asa lehibe rehefa hanapa-kevitra eo amin'ny olona iray. Ny fanaovana izany dia miandry ihany no hahatonga anao Aho noho ny fanahinao vady.